Camry – Interior | Toyota Myanmar – Together Tomorrow Toyota
Camry – Interior
မောင်းနှင်သူမှ ပုံမှန်မြင်ကွင်းထက်ဝေးသည့်နေရာသို့ကြည့်ရန်မလိုအပ်ပဲ အချက်အလက်များကို ပြသပေးသော ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သည့်မျက်နှာပြင် (HUD)
အော်ဒီယို / လမ်းပြစနစ်
အလင်းရောင်ရှိပြီး ကျယ်ဝန်းကာ သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ကားအတွင်းခန်း အတွင်း မှီထိုင်ပြီး အနားယူလိုက်ပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုများကြောင့် အလွန့်အလွန်လက်တွေ့အသုံးဝင်မှု၊ သူမတူထူးကဲသောဆိတ်ငြိမ်မှုနှင့် ထိုင်ခုံအသားများ၊ အနားသတ်များ၏ ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှု၊ နူးညံ့မှုတို့ကို မျက်ဝါးထင်ထင်ခံစားသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အရောင်ပါရှိသည့် ဖောက်ထွင်းမျက်နှာပြင်သည် လေကာမှန်အောက်ပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ပါရှိပြီး ယာဉ်မောင်းသူမျက်လုံးရွှေ့ရအနည်းဆုံးအနေအထားဖြင့် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
8 လက်မအကျယ်ရှိသော မျက်နှာပြင်ကြောင့် များစွာသော အသံအရည်အသွေးမြင့် နည်းပညာပစ္စည်းများဖြင့် စပီကာ9လုံးပါ JBL အော်ဒီယိုစနစ်အား လွယ်ကူစွာထိန်းချုပ် နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး DVD player လည်းပါရှိပါသည်။ လမ်းပြစနစ်သည် အသင့်လျော်ဆုံး လမ်းကြောင်း အား ရှာဖွေလမ်းညွှန်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
နေရာသုံးနေရာရှိ သီးခြားအပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ်ဖြင့် မောင်းနှင်သူထိုင်ခုံ၊ ရှေ့ခန်းမှ လိုက်ပါစီးနင်းသူ ထိုင်ခုံနှင့် နောက်ခန်းမှလိုက်ပါစီးနင်းသူထိုင်ခုံများရှိ စီးနင်းသူတိုင်း အတွက် ၎င်းတို့စိတ်ကြိုက် သီးခြားစီလေအေးပေးထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
2. ကားအရှေ့ခန်းအလယ်ရှိ ပစ္စည်းထည့်ရန်သေတ္တာပုံး
4. နောက်ထိုင်ခုံလက်တင်တန်းရှိ ခွက်ထည့်ရန်နေရာ
နောက်ပြတင်းပေါက်အတွက် ပါဝါနေကာအမိုးနှင့် နောက်တံခါးများအတွက် manual နေကာအမိုး များသည် ကားနောက်ခန်းမှလိုက်ပါစီးနင်းသူများအတွက်သီးသန့်ဆန်သော အကာအကွယ်နှင့် ငြိမ်အေးသောအခြေအနေကို ဖန်တီးပေးစွမ်း နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
*နောက်တံခါးများအတွက် Manual နေကာအမိုးများသည် 2.5L မော်ဒယ်တွင် သာရရှိနိုင်သည်
အရည်အသွေးမြင့်နောက်မှီထိုင်ခုံများနှင့် ခွဲခြားထားသော 40/20/40 ပုံစံကြောင့် ခရီးဆောင်အိတ်ထားခန်းသည် စည်ပိုင်းသဏ္ဍာန်ရှိပြီး ပစ္စည်းရှည်များကို ထည့်သိမ်းနိုင်ပါသည်။
ပွင့်လင်းလွတ်လပ်ပြီး စီးနင်းချင်ဖွယ်ရာ၊ စတိုင်ကျသောအခင်းအကျင်း၊ အလိုအလျောက် အလိုက်တသိလုပ်ဆောင်ပေးမှု၊ သာလွန်ကောင်းမွန်သော အရှေ့ဘက်သို့မြင်နိုင်စွမ်းအပြင် မောင်းနှင်သူထိုင်သည့်နေရာအတွင်း ထိန်းချုပ်ခလုတ်များအား အကောင်းဆုံးနေရာချထားမှုတို့ကြောင့် အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုပေးခြင်းနှင့် ယုံကြည်မှုရှိစွာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်များ တက်ကြွလာစေသည့်အပြင် ပြိုင်ဆိုင်မောင်းနှင်ခြင်းပျော်ရွင်မှုဖြင့်ပါ ရွှင်ပြမြူးကြွလာစေမည်ဖြစ်သည်။
အလင်းရောင်ရှိပြီး ကျယ်ဝန်းကာ သက်တောင့်သက်သာ ရှိသည့်ကားအတွင်းခန်းအတွင်း မှီထိုင်ပြီး အနားယူလိုက်ပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့် သက်တောင့် သက်သာ ရှိမှုများကြောင့် အလွန့်အလွန်လက်တွေ့အသုံးဝင်မှု၊ သူမတူထူးကဲသော ဆိတ်ငြိမ်မှုနှင့် ထိုင်ခုံအသားများ၊ အနားသတ်များ၏ ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှု၊ နူးညံ့မှုတို့ကို မျက်ဝါးထင်ထင်ခံစားသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မောင်းနှင်သူမှ ပုံမှန်မြင်ကွင်းထက်ဝေးသည့်နေရာသို့ ကြည့်ရန်မလိုအပ်ပဲ အချက်အလက်များကို ပြသပေးသော ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သည့်မျက်နှာပြင် (HUD)
အရောင်ပါရှိသည့် ဖောက်ထွင်းမျက်နှာပြင်သည် လေကာမှန်အောက်ပိုင်းတွင် တပ်ဆင် ပါရှိပြီး ယာဉ်မောင်းသူမျက်လုံးရွှေ့ရအနည်းဆုံးအနေအထားဖြင့် လိုအပ်သောအချက် အလက် များကို ကြည့်ရှုနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
8 လက်မအကျယ်ရှိသော မျက်နှာပြင်ကြောင့် များစွာသော အသံအရည်အသွေးမြင့် နည်းပညာပစ္စည်းများဖြင့် စပီကာ9လုံးပါ JBL အော်ဒီယိုစနစ်အား လွယ်ကူစွာထိန်းချုပ် နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး DVD player လည်းပါရှိပါသည်။ လမ်းပြစနစ်သည် အသင့်လျော်ဆုံး လမ်းကြောင်းအား ရှာဖွေလမ်းညွှန်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
နေရာသုံးနေရာရှိ သီးခြားအပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ်ဖြင့် မောင်းနှင်သူထိုင်ခုံ၊ ရှေ့ခန်းမှလိုက်ပါ စီးနင်းသူ ထိုင်ခုံနှင့် နောက်ခန်းမှလိုက်ပါ စီးနင်းသူထိုင်ခုံများရှိ စီးနင်းသူတိုင်းအတွက် ၎င်းတို့စိတ်ကြိုက် သီးခြားစီလေအေးပေးထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နောက်ပြတင်းပေါက်အတွက် ပါဝါနေကာအမိုးနှင့် နောက်တံခါးများအတွက် manual နေကာအမိုး များသည် ကားနောက်ခန်းမှလိုက်ပါ စီးနင်းသူများ အတွက် သီးသန့်ဆန်သော အကာအကွယ်နှင့် ငြိမ်အေးသောအခြေအနေကို ဖန်တီးပေးစွမ်း နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
*နောက်တံခါးများအတွက် Manual နေကာအမိုးများသည် 2.5L မော်ဒယ်တွင်သာရရှိနိုင်သည်
အရည်အသွေးမြင့်နောက်မှီထိုင်ခုံများနှင့် ခွဲခြားထားသော 40/20/40 ပုံစံကြောင့် ခရီးဆောင်အိတ်ထားခန်းသည် စည်ပိုင်းသဏ္ဍာန်ရှိပြီး ပစ္စည်းရှည်များကို ထည့်သိမ်း နိုင်ပါသည်။